အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - - ကုန်သွယ်မှုပြသထားတယ် NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » Tag Archives: ကုန်သွယ်မှုပြပွဲ
Tag Archives: ကုန်သွယ်မှုပြပွဲ
နာမည်ကြီးတံဆိပ်အကြောင်းအရာမှတစ်ဆင့်စားသုံးသူထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့အပေါ် NATPE Panel ကိုပို့ဆောငျဖို့ Alkemy X ရဲ့အန်ဒီအဆိုတော်
session ကိုလည်း Marriott ဟာဒီအမှုမပေါ် Snapchat နှင့် AARP ကနေအကြောင်းအရာဖန်တီးမှုများပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။ NATPE မိုင်ယာမီမှာ NEW YORK CITY-, ရုပ်မြင်သံကြား၏ Alkemy X ကိုမှ Executive Vice နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာအန်ဒီအဆိုတော်ရှေ့ဆက်-စဉ်းစားတွေးခေါ်အမှတ်တံဆိပ်ဆွဲဆောင်မှုအကြောင်းအရာဖွံ့ဖြိုးဆဲခွငျးအားဖွငျ့စားသုံးသူနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဖန်တီးမှု, နည်းလမ်းသစ်တွေရှာဖွေနေကြသည်ကိုဘယ်လိုအပေါ်တစ်ဦး panel ကဆွေးနွေးမှုဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ အဆိုတော် Marriott ဟာဒီအမှုမပေါ် Snapchat နှင့်မှကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူစကားပြောပါလိမ့်မယ် ...
ဖောက်ပြန်သောသူငယ် Animation ရဲ့ရဲ့အက်ရှလေ Postlewaite ရုပ်ပြ-Con မှာ Careers Panel ထဲကအပိုင်းကိုယူမှ
လင်းဒေးလ် Calif. -ဖောက်ပြန်သောသူငယ် Animation ရဲ့ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူအက်ရှလေ Postlewaite, အ panel ကဆွေးနွေးမှုထူးကဲသောအမျိုးသမီးများအတွက် San Diego မှများတွင်ရုပ်ပြ-Con အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ 2018 မှာထူးကဲသော Animation ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူပါလိမ့်မယ်။ Postlewaite သူတို့အောင်မြင်သောအလုပ်အကိုင်များသို့မိမိတို့၏အခွက်လှည့်ပုံကိုဆွေးနွေးခြင်းအတွက်ကာတွန်းစက်မှုလုပ်ငန်းကနေတခြားအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ join ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ panel ကိုလည်းအဘို့လွယ်ကူအောင်ဖြစ်ကြောင်းနည်းပညာသစ်များဆွေးနွေးကြမည် ...
Dimenco နှင့် Ultrahaptics ကွောကျရှံ့မှာပူးတွဲဟန်ပြပြုလုပ်ထားသော Reality (SR) ဒီမိုများဝေငှရန် 2018
အထောက်အထား-of concept ကိုသရုပ်ပြဝတ်စရာ, ဦးခေါင်း-တပ်ဆင်ထားပြသမှုသို့မဟုတ်မျက်မှန်မပါဘဲကြုံတွေ့နိုင် immersive Simulator များအတွက်အစီအစဉ်များကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။ VELDHOVEN, အဆိုပါနယ်သာလန်-Dimenco, display ကိုနည်းပညာများကိုအတွက်နိုင်ငံတကာရှေ့ဆောင်သည်တစ်ဦးပထမဦးဆုံး-of ယင်း၏ကြင်နာဟန်ပြပြုလုပ်ထားသော Reality (SR) စနစ်အဘို့မိမိတို့အယူအဆတင်ပြအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက် Ultrahaptics, ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်လေထု haptics ကုမ္ပဏီနှင့်အတူပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ် တိုးပွားကမ္ဘာ့ကုန်စည်ပြပွဲ (ကွောကျရှံ့) မေလ 30 - ...
NAB မှာနယူးကင်မရာပံ့ပိုးမှုကုန်ပစ္စည်းများခင်းကျင်းပြပေးပါရန် CARTONI
Rome- CARTONI, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာထောက်ခံမှုအတွက်အီတလီခေါင်းဆောင်, NAB 2018 (ဗဟိုခန်းမ, တဲ C9020) မှာ၎င်း၏ထုတ်ကုန်လိုင်းအများအပြားဆန်းသစ်ဖြည့်စွက်မိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ အသစ်အရည်အကြီးအကဲများ, tripod, အောကျခံခုံများနှင့်ဝေးလံခေါင်သီ devices တွေကိုထုတ်လွှင့်ဝေဖန်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ခြင်း, ငှားရမ်းခြင်းအိမ်များနှင့်လွတ်လပ်သောကင်မရာအော်ပရေတာဖြေရှင်းရန်။ Cartoni အသစ်နှင့်ထွန်းသစ်စထုတ်လုပ်မှုတောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့စွယ်စုံဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကမြှင့်တင်ရန်, ချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက် ...
ဆုချီးမြှင့်-အနိုင်ရရှိမှုသိုလှောင်မှုထုတ်ကုန်များနှင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာ Solutions နှင့်အတူ BVE 2018 မှ EditShare ခေါင်းဆောင်များ
ဇန်နဝါရီလ 25, 2018 - - EditShare, အသိဉာဏ်က Shared သိုလှောင်မှုနှင့်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်အတွက်နည်းပညာခေါင်းဆောင် display ကိုအပေါ်ဖြေရှင်းချက် QUALES QC, လူပျို Node သိုလှောင်, Flow မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု, ကားရပ်ရန်သိုလှောင်ဖြေရှင်းနည်းများ, Geevs Next ကိုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအသံလွှင့်ဆာဗာနှင့်ပိုပြီး Basingstoke, ဗြိတိန်တို့ပါဝင်သည် , BVE 2018 မှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အင်း၏ဆုရ QUALES QC file ကိုစိစစ်အတည်ပြုခြင်းနှင့်အရည်အသွေးကိုပြပါလိမ့်မယ် ...
AES နှင့် NAB မှာအသံပွဲများအတွက် Featured အဂ္ဂိရတ် Post ကိုအသံအဆိုတော်များ
Westchester, အဂ္ဂိရတ် Post ကိုအသံကနေနယူး York- Foley အနုပညာရှင်တွေ New York မှာ NAB နဲ့ AES ဖြစ်ရပ်များယခုအပတ်မှာအင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအဘို့အသံကိုဖန်တီးခြင်းအတွက်သူတို့ရဲ့အလုပ်ဆှေးနှေးပါမညျ။ ခေါင်းစဉ်အဂ္ဂိရတ် Post ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့် Foley အနုပညာရှင် Leslie Bloom လိမ့်မည်ကုလားထိုင်တစ် panel ကိုဆှေးနှေး 18rd AES ကွန်ဗင်းရှင်းမှာအောက်တိုဘာလ 143th တွင် "Foley ၏အနုပညာ & သိပ္ပံ။ " ချိတ်တွဲနေ ...
IBC သတင်းများ: Fortium Aspera နှင့်အတူMediaSeal®နယူးလုံခြုံရေးဆန့်ကျင် Ransomware Feature ကိုဖော်ပြပေး
လန်ဒန် - Fortium Technologies ကအမ်စတာဒမ်၌ဤလ IBC 2017 မှာ Aspera တစ်ဦးက IBM ကုမ္ပဏီနှင့်အတူတွဲဖက်အတွင်းခိုးမှု, မတော်တဆဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် ransomware ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုရုပ်ပုံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာကာကွယ်ဘို့က၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ဖြေရှင်းနည်းများကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ ကြွင်းသောအရာ-မှာ on-the-ပျံသန်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Fortium ရဲ့MediaSeal® encryption ကို Aspera ရဲ့မြန်နှုန်းမြင့်ဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ပူးပေါင်း. ပလက်ဖောင်းတစ်ခု integratable အင်္ဂါရပ်အဖြစ်သရုပ်ပြလိမ့်မည်။ ပါဝင်သည်အလိုတော် ...
IBC သတင်းများ: Fortium Signiant ရဲ့မီဒီယာ Shuttle များအတွက် Enhanced လုံခြုံရေး Demo မှ
လန်ဒန် - Fortium, မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းမှဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာလုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက်၏ဆန်းသစ်သော provider က, IBC 2017 မှာ Signiant အတူ MediaSeal LiveFolders ™, On-the-fly နည်းပညာက၎င်း၏အသစ်က encryption ကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ LiveFolders လုပ်ဆောင်ချက်ကို Signiant ရဲ့မီဒီယာ Shuttle, အကြီးစားမီဒီယာဖိုင်ပို့ခြင်းနှင့်မျှဝေများအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်း-စံ software ကို-as-a-service ကိုဖြေရှင်းနည်းနှင့်အတူ interoperating တခုတိုးမြှင့်လုံခြုံရေး feature အဖြစ်ပြသပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါသရုပ်ပြနိုင်ပါတယ် ...
IBC သတင်းများ: Hawk ရဟတ်ယာဉ်-ဝုဒ် Mini ကို V-Lok ပွဲဦးထွက်မှ
နယူးပျံသန်း-လုံခြုံထုတ်လွှင့်ဘက်ထရီကိုတစ်ဦးလက်မှစွန်ပလွံအတွက် 150wh နှင့်ကိုက်ညီတဲ့အထိကယ်တင်တတ်၏။ Ashford, Kent, United Kingdom-Hawk ရဟတ်ယာဉ်-ဝုဒ်, ထုတ်လွှင့်ပါဝါကိုဖြေရှင်းချက်၏ဆန်းသစ်သောဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ, ယနေ့ Mini ကို V-Lok ၎င်း၏ V-Lok ဘက်ထရီလိုင်းအသစ် Ultra-အသေးစားနှင့်ပေါ့ပါးများအပြင်ကြေငြာလိုက်သည်။ ယနေ့အထိကမ္ဘာတွင်အတွက်၎င်း၏အမျိုးအစားအသေးဆုံးဘက်ထရီ Mini ကို V-Lok တစ်ဦး၏စွန်ပလွံအတွက်အငြိမ့်ကိုက်ညီ ...
AFCI မှာ Photogrammetry နှင့် 3D တည်နေရာများဆွေးနွေးမှသိမှတ်ခံစားမှုရဲ့ဘရိုင်ယန်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး
HOLLYWOOD- သိမှတ်ခံစားမှုတည်ထောင်သူနှင့် CEO ဖြစ်သူဘရိုင်ယန်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဟာ AFCI တည်နေရာမှာပါဝါ Chat ကိုပြဇာတ်ရုံတင်ပြအတွက်နေရာများများနှင့်ရှုခင်းများ၏ 3D ဒစ်ဂျစ်တယ်မော်ဒယ်များထုတ်လုပ်ရန် photogrammetry သုံးပြီး၌မိမိကုမ္ပဏီ၏ groundbreaking အလုပ်ဖော်ပြရန်လိမ့်မယ် Los Angeles မှာပြသပါ။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးသောကြာနေ့က7မှာဧပြီလ 12 ကသူ၏တင်ပြချက်စေမည်: 30 မှာစနေနေ့, ဧပြီ 8 အပေါ်ကိုထပ် 11 ညနေများနှင့်: 30 နံနက် ...
NAB NEWS: Kinotehnik Introduces Practilite 604, Smart ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အတူ Compact Fresnel အလင်း
ဒါ့အပြင်အသစ် "SmartSync ဆက်သွယ်မှု," DMX မှတဆင့်မျိုးစုံ Practilites ချိတ်ဆက်ပါ။ တာတူး, စတိုးနီးယား-မှာ NAB 2017, Kinotehnik, ဆန်းသစ်ရုပ်ရှင်ပညာနှင့်အလင်းရောင် accessories များမြောက်ပိုင်းဥရောပထုတ်လုပ်သူ, Practilite 604, "စမတ်" Fresnel အလင်းအိမ်၎င်း၏ရေပန်းစားလိုင်းမှနောက်ဆုံးပေါ်ထို့အပြင်မိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ Practilite ကမ္ဘာ့အသေးငယ်ဆုံး, bi-အရောင်ဖြစ်ပါသည်, variable ကိုရောင်ခြည်အလင်း LED နှင့်မှရောင်ခြည်များနှင့်အရောင်အပူချိန်ချိန်ညှိခွင့်ပြုမတ်ထိန်းချုပ်မှုများပါဝင်သည် ...
WCPMedia န်ဆောင်မှုများ AFM မှာမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းသရုပ်ပြရန်
cloud-based ပလက်ဖောင်း-as-a-service ကိုထုတ်လုပ်ဘို့ဘက်ပေါင်းစုံ tools များနှင့်အတူအကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များ, စီမံခန့်ခွဲ, စျေးကွက်နဲ့ content ဖြန့်ဝေခှငျ့အာဏာ။ စန်တာမော်နီကာ, WCPMedia န်ဆောင်မှုများအတွက်ယခုလမယ့်အမေရိကန်ရုပ်ရှင်စျေးကွက်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Angeles- WCPWeb App ကို, လမ်းလွတ်လပ်သောရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်စျေးကွက်တော်လှန်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့နည်းပညာများနှင့်အကြောင်းအရာဖြန့်ဝေကြောင်း cloud-based မီဒီယာ-စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းထုတ်လုပ်သူများ, ဖြန့်ဖြူး, ရုပ်ရှင်ပွဲတော်နှင့်အခြားသူများကအသုံးပြု, WCPWeb App ကိုတစ်ဦးပလက်ဖောင်း-as-a-service ကိုက ...
Kinothenik Practilite 600 LED ကို Fresnel အလင်းမိတ်ဆက်
ကျစ်လစ်သိပ်သည်းတူရိယာလျှပ်စီးထိရောက်မှု၏အထွတ်အထိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Practilite 600: တာတူး, စတိုးနီးယား-Kinotehnik ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို accessories များမြောက်ကိုရီးယား-ဥရောပထုတ်လုပ်သူများ, smart Fresnel အလင်းအိမ်၎င်း၏ Practilite အကွာအဝေးတစ်ခုအဖွဲ့ဝင်သစ်ကိုမိတ်ဆက်။ Practilite 600 ဟာ ပို. ပို. လူကြိုက်များ bi-အရောင်များ၏အားကြီးသောနည်းနည်းမှေးခငျြး, အာရုံစူးစိုက် Practilite 602 နဲ့ LED အလင်းဖြစ်၏။ ယင်း၏ fixed 75 ဒီဂရီရောင်ခြည်ထောင့်, သစ်ကိုအလင်းမှမရှိစေရန် ...
IBC သတင်းများ: Show ကိုတော်လှန်ရေးကောင်စီမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းမှ WCPMedia န်ဆောင်မှုများ
Aspera ပေါင်းစည်းမှု, တိုးမြှင်ရဲ့ Virtual စစ်ဆေးခြင်း ROOM တွင်ပြီးအများကြီးပို။ Los Angeles-WCPMedia န်ဆောင်မှုများ, IBC2မှာယင်း၏တော်လှန်ရေးသမား, B2016B, cloud-based မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းမှအမ်စတာဒမ်အတွက်စက်တင်ဘာလ 9-13, နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ ပလက်ဖောင်းမှတိုးတက်မှု Aspera မြန်နှုန်းမြင့်ဖိုင်လွှဲပြောင်းအသစ်တစ်ခုအပ်လုဒ်ဒါ utility ကို, ပလက်ဖောင်း၏ Virtual စစ်ဆေးခြင်းအခန်းနှင့်ရိုးရှင်းသောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုမှဖြည့်စွက်၏ပေါင်းစည်းမှုတို့ပါဝင်သည် ...
IBC 2016: CARTONI Lightweight အရည်ဌာနမှူး MASTER 30 စီးရီးလွှတ်တင်
နယူးပေါ့ပါး, ကျစ်လစ်သိပ်သည်း၏ဦးခေါငျးကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ဗားရှင်းအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ရောမမြို့-Cartoni, တိကျကင်မရာထောက်ခံမှုအတွက်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်, ယနေ့, အရည်ခေါင်းက၎င်း၏ဆန်းသစ်လိုင်းမှနောက်ဆုံးပေါ်ဖြည့်စွက် MASTER 30 အသံလွှင့်ခြင်းနှင့် MASTER 30 Cine များလွှတ်ပေးရန်ကြေငြာလိုက်သည်။ ထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ပညာများအတွက်အသီးသီးဒီဇိုင်း, နှစ်ခုအသစ်ကခေါင်း features တွေအများအပြားပါဝင်သည် ...
GPL Technologies က '' Sabatino NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်မှာ Visual Effects ထုတ်လုပ်မှုအတွက် Virtualization ဆွေးနွေးရန်
Las VEGAS- GPL Technologies ကအကောင့် Manager ကို Ron Sabatino နှင့် NVIDIA အကြီးတန်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေး Manager ကိုမီဒီယာ & Entertainment ကမိုက်ကယ် Kaplan virtualization လျှင်မြန်စွာလာမည့် 2016 NAB Show မှာအထူး NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် session တစ်ခုအတွက်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်မှု reshaping မည်သို့ဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, 20 မှာဧပြီလ 12th ဘို့စီစဉ်ထားသည်: 30pm နှင့် nabshow.com မှာအွန်လိုင်းထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်ပြီး ...
1 ၏စာမျက်နှာ 41234	»